mercredi, 23 août 2017 23:33
Toliara: Resultat Bac 45.99%
Le résultat du Baccalauréat de Toliara vient d'être affiché. L'ensemble a un taux de réussite de 45.99%.
mercredi, 23 août 2017 23:29
Marovoay: Jiolahy 4 raindahiny voasambotra
Efa-dahy kalaza amin'ny fanafihana mitam-piadiana mahery vaika sy halatr'omby no saron'ny Zandary avy ao amin'ny tobim-paritra Marovoay ny 12 aogositra lasa teo. Efa tena za-draharaha tanteraka ireto andiany ireto saingy ravan'ny Zandary ihany.
Tompon'antoka tamin'ny fanafihana tao amin'ny Fokontany Bevovoka, kaominina Marovoay niseho ny 07 aogositra lasa teo, izay nahaverezana vola an-tapitrisany, sy ny halatr'omby tao Amparihilava-Marovoay ny 12 aogositra teo ka nahaverezana omby 40 isa.
Efa nisy ny fifampitifirana teo amin'izy ireo sy ny Zandary nandritra io fanafihana voalohany io saingy tsy nisy voasambotra ireo jiolahy ireo. Tsy afa-niala intsony koa tamin'ny fanindroany noho ny velam-pandriky ny Zandary efa niandry azy ireo. Mbola karohina kosa ny roalahy izay nilefa.
mercredi, 23 août 2017 23:02
Masoivoho Japon: Vatsimpianarana African Business Education
Ichiro OGASAWARA ambasaderan’ny Japon dia nanolotra tamin’ny fomba ofisialy ireo valo mianadahy izay tao anatin’ny andiany faha efatra ho any JAPON, izay ao anatin’ny ABE na ny African Business Education, ho fanamasina ny farim-pahaizana ho an’ireo tanora Afrikanina.
mercredi, 23 août 2017 22:44
Antsirabe: Hampiantrano ny fihaonamben'ny vadin'ny Polisy
Ho tontosaina aty Antsirabe ny zaikaben'ny FIVAPOVA na ny fihaonambe voalohan'ny Fikambanan'ny Vadin'ny Polisy sy ny Polisy Vavy eto Madagasikara.
Teo aloha dia nisy isam-paritra ity fikambanana ity fa amin'izao fotoana dia efa navondrona ho iray, ary efa manana sata iraisana ka izao hanao ny fihaonambe voalohany eto Antsirabe izao.
Mpizaika polisy vavy vadin'ny polisy manodidina ny 1520 eo ho eo no efa nisoratra anarana hiatrika ity hetsika ity eto Antsirabe, izay hosantarina amin'ny diabe sy lanonana maro samihafa arahina valandresaka sy fampiratiana.
Eo ambany fiahian'ny vadin'ny filoham-pirenena moa ny hetsika hanomboka ny alakamisy 24 Aogositra izao io.
mercredi, 23 août 2017 19:44
Sambava: Nidoboka am-ponja ilay Mpamily Bajaj nandratra Polisy monisipaly
Tazomina am-ponja vonjimaika amin'ny fonjan'Antalaha ilay mpamily Bajaj nandratra Polisy monisipaly iray tamin'ny vy, ary mbola niady tamin'ny iray hafa izay nampijanona azy noho ny tsy fanarahan-dalana matetika ataony, toy ny fanaovana taingimbe, fivoahana ny tanan-dehibe tsy nahazoana alalana.
Amin'ny zoma 25 aogositra no handalo mpitsara mpanao famotorana ny raharaha.
mercredi, 23 août 2017 19:37
Fianarantsoa: Mpaka an-keriny saron'ny Polisy
Fikarohana in-droa miantoana nandritra ny folo andro no nazahoana ny vokatra momba ilay fakana an-keriny ny zanaka mpandraharaha iray teto Fianarantsoa.
Natolotra ny fitsarana omaly 22 aogositra ireo lehilahy 5 nahavanona izany, raha efa naiditra am-ponja vonjy maika ny roa tamin'ireo iray tsikombakomba.
Tovolahy iray no karohina amin'izao fotoana izao.
Toy izao ny fizotry ny tranga.
Nofandrihan'ny mpaka ankeriny tamin'ny alalan'ny kaonty facebook ilay zazalahy tokony ho 15 taona zanaka mpandraharaha. Nomen'izy ireo fotoana ny 10 aogositra lasa teo izy ary ny hariva tokony tamin'ny 5 ora sy sasany no nisehoan'ny tranga teo Ambatomena.